केही कारणले घटेको छ! मैले बुझेका निम्न कारणहरु : - Lagani News
Home Unlabelled केही कारणले घटेको छ! मैले बुझेका निम्न कारणहरु :
केही कारणले घटेको छ! मैले बुझेका निम्न कारणहरु :
Published: Friday, July 13, 2018 2018-07-13T14:27:00-07:00
Santosh Raj Bajgain July 13, 2018
सन्तोष राज बजगाई :
बजार घटनु अस्वाभाविक नै हो भन्न मिल्दैन ,केही कारणले घटेको छ! मैले बुझेका निम्न कारणहरु :
१. बजार निरन्तर बुल साईकलमा थियो । २९२ बाट सुरु भएको बुल १८०० लाईनै पार गरि १९०० छुन लागेको थियो । १९०० छुन नपाउदै बजार रिभर्स जोनमा पुग्यो, र निरन्तर रुपमा बजार कम हुँदै गयो । हामीले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ कि बुल आधारभुत हिसाब सङ्गै सङ्गै मनोबैज्ञानिक हिसाबले पनि अघि कुदिरहेको हुन्छ । बुलमा नयाँ लगानिकर्ता र बियर नदेखेको लगानिकर्ताहरु अलिक बढी नै बजार प्रती सकारात्मक भै दिन्छ्न ,बजार वृद्धि हुनको लागि मात्र बनेको हो,बजार बाट कमाउने मात्र हो भन्ने विचार भाईरल हुने गर्दछ । यस्ता लगानिकर्ताले बुललाई मज्जाले कुदाउछ्न । बुललाई अत्याधिक गतिले कुदाउन खोजिदा बुल थाक्छ र अघि बढनको निमित्त उसलाई केही समय आराम चाहिने गर्दछ ,यहि कारणले गर्दा हामी लामो करेक्सन (सेकुलर बियर तर्फ ) जाने गर्दछौ । अहिले हाम्रो बजारमा भएको पनि त्यही हो । एउटा उदाहरण : NTC मा नयाँ लगानीकर्ताको अँखा पुगेन , NTC कुदेन र अहिले अरु सबै थाकेर भुमिमा खस्दा उ टीकेर बसिरहेको छ ।
२. कालो धन छानविनले पनि एक प्रकारको प्यानिक सिर्जना गर्यो । धितोपत्र बोर्डले छानविन समिती त खारेज गर्यो तर पनि कुनै दिन फेरि यहि मुद्धा बिउतिने सक्ने मनोबैज्ञानिक कारणले गर्दा बजारमा सेलिङ्ग प्रेसर आएको पाईन्छ । त्यस्तै श्रोतको चिन्ता नभएका लगानिकर्तामा पनि STOP LOSS को मनोबैज्ञानिक असर पुगेको छ । भोलि पर्सि नि बजार कम हुन्छ भने म आज किन सेयर नबेच्ने, भोलि पर्सि फेरि किन्दा त्यही पैसाले अझै धेरै सेयर आउने कुराले उनिहरुलाई अहिले सेयर बेच्न लगाईरहेक छ ।
३.बजार कम हुन दिनुमा मिडियाको पनि केही योगदान छ । शिर्षक नै लगानीकर्ता तर्साउने खालका हुन्छ्न । भित्र नेप्सेको डाटा मात्र हुने र बाहिर चाहिँ लगानीकर्तालाई मनोबैज्ञानिक त्रास दिने काम भैरहेको छ ।
४. अघिल्लो हप्ता बजारलाई जुवा घर नै बनाईयो । एक दिन नेप्से परिसूचक ५% ले कमि भयो अर्को दिन ५% ले वृद्धि भयो त्यसपछिको एकै दिनमा बजारमा निकै उतारचढाव भयो । यी घटनाले गर्दा नयाँ लगानीकर्ता बजार प्रती त्यति खुशी भएनन्न। उनिहरुको आत्मवल कम भयो । एक जना लगानीकर्ता मित्रले भन्नू भयो " दुख गरेर कमाएको पैसा हो यार, जुवानै रहेछ नि यार यो बजार भन्ने कुरा त ,कुन दिन के हुन्छ थाहा छैन , बरु २% मा बैंकमा राख्छु । वास्तवमा ती मित्रको कुराले मेरो मन छोयो। अघिल्लो हप्ताको घटनाले बजार प्रती लगानिकर्ताको धारणा केही नकारात्मक भएकै छ , र केही लगानिकर्ता बाहिरेको पनि हामी अनुभव गर्न सक्छौ ।
५.अर्को कुरा पोर वर्षपाउने लाभांश र अहिले पाउने लाभांशमा खासै ठुलो अन्तर नहोला ,व्यापक बोनस र राईटले गर्दा कम्पनीलाई लाभांशमा व्यापक सुधार गर्न गाह्रो छ । " पोर साल सस्तो मुल्यमा कम्पनीको सेयर किन्दाको लाभांश र अहिलेको लाभांश एकै छ भने किन अहिले धेरै मुल्य हाल्ने ? एक जना लगानिकर्ताले दिएको जवाफ " ।
मेरो विचारमा अहिले बजार कमि आउनुमा मनोबैज्ञानिक असर मुख्य कुरा लाग्यो। करेक्सन बुल बजारमा सामन्य कुरा हो , यसमा आत्तिनु हुन्न । तर सेफ कम्पनी छान्दै जानु पर्छ । सेफ कम्पनी भन्नाले धेरै प्रतिफल दिने तर बजार मुल्य कम भएका । सामान्य रुपमा बजारमा २०% प्रतिशत कमि आएकोे अवस्थामा बजार बियर साईकल तर्फ उन्मुख हुन्छ। अहिले नै हामी बियरमा छौ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
निस्कर्स : अहिले बजार बियर हुनु भनेको मनोबैज्ञानिक त्रास हो ।